KDE, Gnome, Xfce, LXDE na uche m banyere ha. | Site na Linux
KDE, Gnome, Xfce, LXDE na uche m banyere ha.
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux, Ndị ọzọ
Desktọpụ, dị ka nkesa, na-emezu ebumnuche ha dịka mkpa anyị bụ isi na ojiji anyị na-enye kọmputa, n'oge a, ekwenyere m na ihe niile (Ma ọ bụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ) Anyị maara ihe onye ọ bụla n’ime ha nwere ike inye.
Aga m ewere ohere. M, onye ọrụ nke gbalịrị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ desktọọpụ niile dị na ya GNU / Linux, Echere m na e nwere isi 4 ma ọ bụ kacha mkpa ugbu a, na m ga-akọwa onye ọ bụla n'ime ha otu a:
1 KDE: desktọọpụ GNU / Linux zuru ezu ma rụpụta ọrụ.
2 Gnome: Eze na-enweghị ocheeze.
3 Xfce: Nhọrọ nke Gnome 2
4 LXDE: Onye pere mpe, kachasị ọsọ ma ọ dịkarịa ala na klaasị
KDE: desktọọpụ GNU / Linux zuru ezu ma rụpụta ọrụ.
Malite na isi na "ihe kachasị mma" dabere na uto na mkpa nke onye ọ bụla, ọ bụghị ihe nzuzo nye onye ọ bụla na mgbago ya na mgbada ya, KDE emeela ohere dị ùgwù n'etiti ndị ọrụ nke GNU / Linux.
Na opupu nke KDE 4 ihe wee jọọ njọ, ma dịkwa nso n’anya KDE 3.5, M, dị ka ọtụtụ, gbara ọsọ gaa Gnome. Ana m ekwupụtakwa na ọ na-adị m mgbe ụfọdụ m bụ ihe efu.
Ihe ọ na-eme KDE ya mere mmezu gabigara ihe anya puru ihu. Dịka ọmụmaatụ, ihe m na-akatọ mgbe niile bụ ọnụọgụ nhọrọ dị na ya, ma desktọọpụ na ngwa ya. Ma egela m ntị, nke a abụghị ihe na-adịghị mma ebe ọ bụ otu n'ime isi na ihu ọma oche German.
Nsogbu a nwere ike ịbụ na maka ụfọdụ, nhọrọ ndị a niile adịghị ebe kwesịrị ekwesị ma nke a na-eme ka ọtụtụ ndị ọrụ nwee ọtụtụ nsogbu, nke m kwughachiri, na-eweta uru.
Na KDE ị nwere mmetụta na ngwa ọ bụla nwere naanị ihe ị chọrọ na ọbụlagodi ntakịrị. KDE O meziwanye nke ukwuu na arụmọrụ na arụmọrụ, na ịhapụ ịhapụ atụmatụ anyị ji eme ihe, ọ nweela ike itinye ụzọ ọhụrụ nke iji desktọọpụ. Ihe atụ nke a bụ plasma na Ihe, ngwá ọrụ ndị a pụrụ iji rụọ ọrụ nke ọma dịka o siri dị, na ọtụtụ n'ime anyị ka na-aghọtaghị.
KDE bụ tebụl emere maka ndị ọrụ ahụ niile dị njikere itinye obere ihe oriri, mana ndị ga-enweta elele nke ịbawanye uru na ịrụ ọrụ nke ọma na ọrụ ha kwa ụbọchị na kọmputa. Maka m, Ebe Obibi Desktọpụ gafere inwe otu panel (ma ọ bụ abụọ), a menu, a usoro tree ... wdg. Ebe obibi Desktọpụ bụ ngwaọrụ na ngwa niile na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ nke ọma na faịlụ na folda anyị, yana nke a KDE na-ewe nkwụ.
Kedu ihe anyị na-eji eme ihe mgbe anyị na kọmputa na-arụ ọrụ? Echere m na 98% nke ndị na-agụ blog a ga-ekwenye na m bụ Njikwa na Njikwa nchekwa. KDE O nwere maka nke a ngwa nke na-achọghị ihe ngosi na ụdị agwa na nhọrọ dị: dolphin. Y’oburu n’enweghi ike imeputa ihe na dolphin, mgbe ahụ ọ gaghị abụ na faịlụ ọ bụla ọzọ na Njikwa nchekwa, nke dị mfe.
dolphin awade taabụ, ogwe ndị ọzọ, ọnụ ejikọtara, injin nchọ, nyocha nyocha, yana uru ndị ọzọ na - eme ka ị nwee ike ijikwa akwụkwọ, faịlụ ma ọ bụ folda gị.
Ma KDE ọ na-aga ọbụna n'ihu. KDE -enye anyị a zuru ezu na ngụkọta mwekota n'etiti onye ọ bụla nke ya mmiri. Agbanyeghị na anaghị m eji ha eme ihe, njikọta Akonadi / Nepomuk / Virtuoso ha na-enye gị ike na-enweghị atụ mgbe ejiri ya nke ọma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ihe, ọ dị ụkọ na ịchọtaghị KDE nri ngwa maka ya.
Nkwughachi m: KDE Ọ bụ maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ka ihe niile dị n'aka, rụọ ọrụ nke ọma, rụpụta ma chekwaa oge ọ bụla enwere ike. Ọnọdụ dị mma maka ndị ọrụ na-ejikwa ọtụtụ ozi, ndị mmepe, ndị nrụpụta ma ọ bụ ndị chọrọ ịnwe nhọrọ maka ihe niile, ma hazie desktọọpụ ha n'ụzọ kachasị mfe.
Gnome: Eze na-enweghị ocheeze.
Gnome O doro anya na ọ bụ ogologo oge eze nke Desktọpụ Gburugburu ebe m si ele ihe anya. Na opupu nke KDE4, ịrị elu nke Ubuntu, na ịdị mfe nke mara ya mgbe niile, nke nta nke nta ọ ghọrọ ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị ọrụ gburugburu ụwa site na ntọhapụ nke Gnome 2, ebe ihe niile dị mfe, na ịnweta ngwa yana nhọrọ Desktọpụ rụzuru site na ịpị aka ole na ole.
Gnome 2 Ọ bụ Ebe Obibi Ebe Obibi nke a pụrụ ịrụkwu ọrụ karị na nke a gaara enweta uru ka mma. Agbanyeghị, ndị mmepe ngo abanyela Gnome 3, Desktop Environment na ọba akwụkwọ dị mma, mana nke nọchitere mgbanwe na mberede (ọbụna karịa nke kpatara ya KDE4) maka ndị ọrụ Gnome 2, onye hapụrụ ngbasa na-achọ ndị ọzọ dị ka Xfce, Lxde ma ọ bụ nwe KDE.
Enweghị ike ikwu nke ahụ Gnome ya Shell bụrụ ngwa ọjọọ dị anya na ya. Gnome 3 Ọ ka dị ike ma nwee ọmarịcha ngwaọrụ, ọbụlagodi ọtụtụ ndị ọrụ nwere ntụsara ahụ na akụkọ ahụ, mana nkà ihe ọmụma ọrụ nke gosipụtara tebụl a gbanwere n'ụzọ pụtara ìhè na ọdịdị ya, ekwenyere m, anaghị elekwasị anya na onye ọrụ njedebe.
Ihe obula bu ebum n’uche ndi n’ile ya, anyi huru n’ime blọg a mgbanwe ndi desktọọpụ a na eme, nke n’uche m, adighi aga nke ọma. Gnome ọ na-anwa ịbanye n'ahịa nke ọ na-enweghị ala, na ebe ndị ọzọ dị elu ndị ọzọ adịlarị. Ọdịnihu nke Gnome dị n’ime GnomeOS, ọrụ m na-agaghị anwa anwa kwuo banyere ya, ebe ọ bụ na ọ bụ ntakịrị ihe ka a maara banyere ya.
Mana ọ bụghị ihe niile dị njọ, dịka m na-ekwu, Gnome Ọ nwere ngwa dị ezigbo mma, dị oke nfe ịhazi, n'ọnọdụ ụfọdụ enwereghị nhọrọ ma e jiri ya tụnyere nke ọ nwere - KDE, ma dị ka ike na arụ ọrụ.
Gnome ọ na-ejekwa ozi dị ka ihe ndabere maka ndị ọzọ Ụlọ akwụkwọ na-akpali nnọọ mmasị dị ka ha dị Ịdị n'Otu y pawuda. Gị Njikwa na nchekwa Manager (Nautilus), ọ bụ ezie na o nweghị àgwà niile dolphinỌ dịkwa ezigbo arụpụta ma dịkwa mfe ma e jiri ya tụnyere nke gara aga a kpọtụrụ aha. Na-mepụtara na Gtk, O nwere ọtụtụ nchịkọta nke atọ na nke atọ, mana ọ dị mwute ikwu na Eze anaghịzi ama ewu ewu.
Nkwughachi m: Gnome Ọ bụ maka ndị ọrụ ahụ ihe ịma aka ọhụụ na ihu ọhụụ ọhụụ dọtara ọkachasị na teknụzụ emetụ aka, ndị na-echeghị iji keyboard na imefusị obere ihe. Ezigbo ma ọ bụrụ na ị na-eji shells ndị ọzọ dịka pawuda o Ịdị n'Otu.
Xfce: Nhọrọ nke Gnome 2
Xfce abịawo mejupụta oghere nke fọdụrụ n'ọtụtụ Gnome 2. Otu desktọọpụ nke adịla afọ ole na ole na-agbanwe nke nta nke nta, onye mmepe ya na-eto n'ihi obere ndị mmemme ọ nwere. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe dị iche iche ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche nke ahụ Xfce ọ bụ ewu ewu na-adịbeghị anya.
Xfce abụwo a Gnome na obere arụmọrụ. Ọdịdị ahụ dị otu, ọ na-ezutekwa ihe achọrọ nke ịdị mfe, ngwa ngwa, mfe ịhazi na ozugbo ịhazi ya, mara oke mma. Ma ebe ọ bụ na ihe niile enweghị ike ịdị mma, ọ na-enweghị ọtụtụ ihe, ngwa ya dị oke oke ma ọ nweghị ezigbo ngwaọrụ iji jikwaa sistemụ ahụ.
N'ezie, na-ewu na Gtk, i nwere ike zuru oke ka ojiji nke ngwa nke Gnome, ma ọ dịkarịa ala m ga-achọ ka o nwekwuo ngwá ọrụ ya.
Otu n'ime adịghị ike nke Xfce ọ bụ kpomkwem ya Njikwa na nchekwa Manager: Eke. N'okpuru ngọpụ na ọ ga-efunahụ ọkụ, ndị mmepe anaghị achọ itinye mgbakwunye taabụ ma ọ bụ ogwe, yabụ iji ngwa a rụọ ọrụ na-ewe ọtụtụ ọrụ.
Maka ndị ọzọ, ihe niile dị mfe ma nwee ike hazie ya Xfce kpamkpam (ma ọ bụ maka ọtụtụ akụkụ) site na Ogwe Nhazi gị. 4.10.dị XNUMX gbakwunyere ọtụtụ ndozi maka ndị ọrụ ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ọdịnihu nke Desktọpụ Gburugburu ebe a ugbu a Debian ewerela ya dị ka desktọọpụ ndabara.
Nkwughachi m: Xfce Ọ bụ maka ndị ọrụ ahụ adịghị mkpa iji rụọ ọrụ dị elu na sistemụ ahụ, ndị na-amasị Desktọpụ dị mfe, ma chọọ ịnweta ngwa ha niile na ịpị aka ole na ole. Ọ nwere ike ịdị mma maka ndị edemede, ndị nta akụkọ na ndị na-eji kọmputa maka ihe ndị bụ isi, na-enye nguzozi n'etiti ike na ọsọ.
LXDE: Onye pere mpe, kachasị ọsọ ma ọ dịkarịa ala na klaasị
Lxde bụ nke kacha nta na Desktọpụ Gburugburu etolite na Gtk, bụ nke kachasị ọsọ na, ya mere, nke kachasị enweghị ngwa nke aka ya, ya mere Xfce, ị ga-eji ọtụtụ ngwaọrụ Gnome iji mezue ohere ya di iche iche.
Ọdịdị ya na ndabara na-echetara anyị Windows XP na obere ọrụ ị nwere ike ịnweta nhazi ndị mara mma, agbanyeghị, isi okwu dị na Desktọpụ Environment bụ Njikwa ya na Njikwa nchekwa: PCManFM.
PCManFM O nwere ụfọdụ àgwà nke ụmụnne ya ndị okenye dịka nku anya, nke jikọtara ya na ọsọ ya na ịma mma ya, mee ka ọ bụrụ ihe kachasị mma Eke, nke ọ dịkarịrị elu karịa arụmọrụ, nhazi na nhazi.
Nkwughachi m: Lxde Ọ dị mma maka ndị otu obere arụmọrụ maka ekele ọ na-enye anyị n'etiti ọsọ na ịdị mfe. Akwadoro maka ndị ọrụ nwere obere ahụmịhe, ebe ọ bụ na ihe niile adịchaghị nso.
Ekwuru m ya na mbido ma m kwughachi ya ọzọ: Tebụl ọ bụla zuru ezu ma ọ bụ na-ezughị dị ka mkpa nke ọ bụla. Otu n'ime ụdị 3 ndị a (obviating Gnome shei)Njikere na njikere ịga, ha nwere ike ịdị mfe iji maka ndị ọrụ ọhụụ.
Nke a bụ ihe ọzọ karịa nyocha na-enweghị atụ na nke a na-achọghị na nke ọ bụla n'ime Desktọpụ Gburugburu. Onye ọrụ ọ bụla maara ókè ha nwere ike ịhazi, hazie ma jiri nhọrọ nke onye ọ bụla n'ime ha, nke, n'ezie, enweghị m ike ịkọwa ebe a.
Ha niile dị mma na ihe ha na-eme, nke ọ bụla na-aza mkpa nke ụdị ndị ọrụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ị jụọ m, m ga-anọnyere KDE y Xfce, dabere na ihe ịkwesịrị ime. Kedu nke masịrị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » KDE, Gnome, Xfce, LXDE na uche m banyere ha.
Ihe 148 kwuru, hapụ nke gị
Eziokwu bụ na m hụrụ Xfce, LXDE na KDE n'anya, ha dị mma ma ọ bụrụ na otu ma ọ bụ nke ọzọ dabere na ngwaike n'ihi na ihe niile 3 enwere m ike ịme otu ihe ma ọ bụghị n'otu ụzọ ahụ. Xp
na ezigbo ozi enyi xD maka m Ahuru m kde n’anya n’agbanyeghi na n’onwe ya o di arọ mana achọghị m ịma: 3 ọ bụ ihe mara mma mgbe ị jisiri ike hazie ya ka ị chọrọ xD ebe m hapụrụ gị ka m hapụrụ kde m dị oke ọnụ ahịa:
na yapa 😛 M na-ahap this nkuzi a nke m mere na blọọgụ m ka ọ na-akụ ya ma hapụ ya iri
Zaghachi Makubex Uchiha (azavenom)
Amatala m ụnyaahụ n'ụzọ ezighi ezi onye ọbịa ahụ kwụsịrị blog m maka eziokwu dị mfe nke iru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3000 nleta n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwa 4 nke m nwere ya, m na-ekwukwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3000 n'ihi na ọ fọdụrụ m ntakịrị ịga ebe ahụ na nke ahụ na-eme m na ọ dịghị ihe na-enweghị ịgwa m tupu na ọ bụ ya mere na m furu efu ihe niile na-eri m ime 🙁
Amaara m na ozugbo @elav nwalere KDE ọ ga-anọnyere hahaha. KDE mere ka ọ dị mma na nsụgharị ndị a ikpeazụ, na nsụgharị a, ha ga-elekwasị anya na ndozi ahụhụ na ndaghachị, mkpebi dị mma nke ndị mmepe maka "ibudata gbanwe
GNOME2 bụụrụ m nkasi obi kachasị mma, nke a na-agbanwe agbanwe, nke kachasị nke desktọọpụ kachasị. Ọ bụ ihe nwute na nkà ihe ọmụma ya agbanweela. Ọ bụ ya mere m ji soro Debian Squeeze ruo mgbe nkwado ya kwụsịrị, mgbe ahụ, m ga-eche banyere ịkwaga igbe, onye maara xfce.
Enwere m KDE na Xfce ugbu a na netbook nke ọrụ. Ekwesịrị m ikwupụta na n'oge na-adịbeghị anya m ejirila KDE… 😕
KDE bụ ihe ọzọ. M na-ejikwa KDE na Xfce mana ekwesịrị m ikwupụta na na KDE ọ bụ iji rute ma jiri ya, ihe niile dị njikere ka onye ọrụ adịghị mkpa ịme ma ọ bụ mara ihe ọ bụla, zuru oke maka ịrụ ọrụ na ịhapụ igbu oge ịhazi ihe.
Ugbu a, m na-edegara gị akwụkwọ site na Xfce na eziokwu bụ na ị ga-etinye oge dị mma iji nweta ya "njikere" n'ihi na ndabara ọ bụ ihe jọgburu onwe ya, n'eziokwu m na-etinyekwu oge na-ahazi ma na-ege ntị karịa ịrụ ọrụ xDD
Ee, n'ezie, mana ka ị wee hụ, Tuning Xfce maka m dị mfe karịa KDE. Na mgbakwunye, Gtk nwere ọtụtụ isiokwu na nhọrọ, naanị ị ga-atụle gnome-look with kde-look ..
> ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ
Bụ na isiokwu na-abịa na KDE (na Obsidian) bụ ndị mara mma 🙂
Ndewo otu ajụjụ. Ka anyị chefuo maka ịkụgharị, atụla egwu, agba, ihe ịchọ mma, wdg. Anyị ga-elekwasị anya na naanị sistemụ na ngwa ọ ga - arụ ọrụ ka ọ na - abịa, na - enweghị “nrapụ” n’ihi na ịmaatụ, ụcha ma ọ bụ nsonaazụ windo agaghị eme mmemme ahụ m na - eke ma ọ bụ ihe m na - eme nyocha banyere oke radieshon dị ikuku na-edozi onwe ya maka m (ọ bụ ya mere m ji kwuo "pijadas" na-enweghị mkpa). You na-eji linux kemgbe afọ ole na ole (Ubuntu, Opensuse, Fedora, Scientific Linux na Gnome, KDE na Xfce) ma na-agbanwe nkesa maka ihe ngwaike na n'oge na-adịbeghị anya n'ihi na enweghị m ike ịwụnye ọnwa ole na ole ọ bụla, achọrọ m ọtụtụ afọ n'ihi nnwale bụ ihe ikpeazụ m, ọ bụkwa ọrụ, nyocha. Enweghị egwuregwu marcinanito, enweghị ọhụụ, ma eleghị anya vidiyo na ụfọdụ egwu mp3 na naanị na kọmputa m. Mana n'ezie, achọghị m ịnwe nkesa na gburugburu dị iche iche na kọmpụta ọ bụla, ọ bụrụ na enwere kọmpụta 5 niile gụnyere maka ihe nke m. Oge bara ezigbo uru na enweghị m ike ịnọnyere omenala ma ọ bụ omume dị iche iche site na kọmpụta gaa na nke ọzọ, site na iji mmemme na otu gburugburu na onye ọzọ na gburugburu ọzọ nwere nhọrọ dị iche iche, taabụ, wdg. Ghọtara ihe m na-ekwu, ọ bụ ezie na mmadụ ga-ekwu na enwere ike iji otu ngwa ahụ na desktọọpụ dị iche iche. Ma ọ bụghị ikpe.
Ya mere, ahọrọla m nke sayensị ma KDE ọ na-eburu dị obere, ọ bụ ezie na ọ bụ nke kachasị nta na ya, ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ ihe m na-eche, mana gburugburu ebe a dị oke nke abụọ na ha anaghị enye ya mkpa ọ dị inwe arụnyere ya nke ọma ma mezue ya. Ma ọ dịkarịa ala, enwebeghị m ike ịnweta ya dị ka Fedora KDE kemgbe ntụgharị ya. Na Scientific, dịka na Centos echere m, ị ga-eji aka gị kwụsị ọtụtụ ngwa gnome, ọ bụrụ na ị maara ha iji mata ha nke ọzọ, ịhapụ KDE dị ọcha. Mana ihe m kwuru, enwetaghị m ya ma amaghị m ma ọ bụ m kpatara ya ma ọ bụ na nkesa ahụ anaghị enyekwu.
Yabụ taa Slackware dị m n'uche na Kde na Xfce. Kedu nke ị ga-ahọrọ? Ana m eche na m nwere igwe ochie nke ga-adị mma maka Kde, ọ bụ ezie na na SL ọ gara nke ọma yana nke Xubuntu kachasị ọhụrụ. Xubuntu agaghi m, odighi ihe Ubuntu, ya mere adighi m agha. Yabụ otu nhọrọ ga-abụ Kde niile ma ọ bụ nke ochie nwere XFCE, mana Regard .. Banyere eri nke nkwanye gị nke KDE maka gburugburu na-arụpụta ihe, ị ga-akwado ya ka m nweta ya ebe m na-arara onwe m nye nyocha na mahadum?
Ekwesịrị m ịsị na SL na Gnome bụ nke kachasị mma, achọrọ m ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na KDE, mana m ekwuola na enwebeghị m ihe ịga nke ọma. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere nkwanye ọ bụla iji wụnye KDE na SL ma ọ bụ Centos nwere otu ịdị ọcha dịka nke Fedora KDE, m ga-enwe ekele maka ya. Isiokwu nke multimedia codecs na stof na SL KDE bụ bit na-egbu egbu.
Ihe ọzọ gbasara KDE na nkwanye gị. M na-eji draịva USB ọtụtụ ma ha dị mkpa. Na Gnome, a na-amịpụta ha n'ụzọ dị ọcha, ma ọ bụghị na KDE na dolphin, ị nwere ike ịtọsa ha, ee, mana a na-enye ha nri mgbe niile na n'ikpeazụ ị ga-adọpụ ha site na ịta ụta ezé ... otu ụbọchị diski ahụ ga-agbaji, n'ezie! You nwere azịza na KDE? Nke a dị mkpa n'ihi na m na-eji SL Gnome naanị maka nke a.
Aghọtara m na n'ikpeazụ ọ bụghị ajụjụ. N'ikpeazụ, na-echebara ọrụ m echiche, ị na-akwado SL ma ọ bụ Slackware?
Ekele, na ị maara na ekele maka ndị dị ka gị, ọtụtụ n'ime anyị hapụrụ Windows.
O doro anya na ọ bụ nnọọ ọrụaka na e nwere ole na ole injinia ma ọ bụ ndị ọkà mmụta sayensị gburugburu ebe a. Ekele m na agbanyeghị makana ụfọdụ ihe ị dere na-enyere aka nke ukwuu. Ana m agụ ya kwa ụbọchị.
Yup, M na-amalite ikwere na ee hahaha
Ee !!! \_ (ツ) / mana onye obula na eme ofuma.
M na-ahọrọ LXDE na nke "na-esighi ike" bụ n'ụzọ dịtụ ntakịrị maka gburugburu ebe m nwere echiche dị mma otu n'ime ndị na-ahụ maka faịlụ kachasị dị nro nke m hụworo, dị ka PCManFM, mana hey. Na mbido m na-eji Gnome eme ihe ma m jiri ya mgbe ọ ruru Gnome 2 mana m bụ otu n'ime ndị izizi dara na Gnome 3 na n'ezie Shell ha ma ọ bụ ihe ọ bụla Gnome 3 gwara m na ọ bụ oge ịchọ ọhụụ ọhụrụ rue Ana m aga LXde ma enwere m obi ụtọ ịhụ na n'ihe ụfọdụ ọ dịkarịrị ngwa ngwa karịa XFCE mana amaara m na XFCE na-eti ya ihe na Robustness n'ihi na n'agbanyeghị na enwere ndị mmepe ole na ole (ejiri m n'aka na obodo XFCE ka ibu karịa LXDE) mana hey… ọ bụla crazy na ya isiokwu.
O yighị ka ọ dị obere na-esighi m ike, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịme otu ihe ahụ na gburugburu ebe ndị ọzọ, yana obere oriri, dịka ọmụmaatụ ọ bụ ya mere m ji hụ Lubuntu n'anya, ọ nwere isiokwu dị mma nke ọma ma na-eri obere.
N'ọnọdụ ọ bụla, m ga-ekwu na ọ bụ ihe amachaghị maka ndị ọrụ oge mbụ karịa gburugburu ndị ọzọ, ọkachasị n'akụkụ nke ịhazi LXDE, nke bụ ebe ọ na-ada ntakịrị ...
Eeh, n'ezie ị nwere ike ịme ihe dị mma na gburugburu ebe ndị ọzọ, mana ha bụ ọrụ dị mfe ma dị oke mkpa.
Ka anyị hụ, m ga-eme ka ọ dịrị gị nfe. N'ihe banyere ike, m na-eme ya dabere na nrụpụta ọrụ nke ngwa ọrụ a.
- Ndi PCManFM nwere ogwe ihe nzacha ọdịnaya?
- Ndi PCManFM nwere igwe ihe eji acho ihe?
- Ndi PCManFM nwere onu ogugu n’ime ya?
- Ndi PCManFM nwere ogwe?
- Ndi PCManFM nwere nhọrọ iji gosi otu ebe nchekwa?
- PCManFM ọ nwere nhọrọ iji tụnyere faịlụ?
Ikwesighi ịza m maka na m ma azịza ya. Mụ onwe m ga-ekweta na n'agbanyeghị ole m masịrị Xfce, ọ gaghị enwe ọkara nhọrọ nke KDE nwere, nke ya na ngwaọrụ ya na-eme ka ọ bụrụ Desktọpụ kachasị arụpụta ma dị ike.
Maka savvy, dị nnọọ tụnyere krunner ka Gnome si "ọsọ". 😀
Ma, ọ bụ na arụpụtaghị dị ka echiche gị nke arụpụtaghị, nke na-apụtaghị na ị mejọrọ, mana maka m ihe na-arụpụta ihe bụ ngwa nke na-enye m ohere ịme ihe ụfọdụ ọsịsọ na ngwangwa, maka gị na PCManFM nwere mmanya nyocha. ọdịnaya ma ọ bụ ọchụchọ ma ọ bụ ọnụ bụ ọrụ, maka m ha bụ mgbakwunye, ọrụ nke mmemme ndị ọzọ emere maka ha, dị ka ọnụ, ma ọ bụ igbe ọchụchọ (nke bụ eziokwu na ọ bụ ihe LXDE na ndabara enweghị oge) ma ọ bụ nzacha, iche, bụ ihe ị nwere ike itinye na pịa abụọ, ma ọ bụ na dịka m kwuru, mmemme ndị ọzọ emere maka ya nwere ike ịme.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji dezie foto site na Okwu, dịka ọmụmaatụ, inwe ike idezi ya site na Photoshop, nke emere maka ya?
E wezụga nke ahụ, e kere LXDE na-achọ ọkụ na desktọọpụ dị mfe, nke dabara na obere ọrụ ma ọ bụ obere ọrụ zuru oke ma ọ bụ dị nkenke, yabụ ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịmị mkpụrụ, ha anaghị ahọrọ LXDE n'ihi na e meghị ya maka nke ahụ.
E wezụga nke ahụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmị mkpụrụ n'ọrụ na ụlọ ọrụ, ị nwere ike iji Windows yana mmemme ya na mmemme ya, yana mmemme ndị ọzọ emere maka nke a ma ọ bụ ọrụ ahụ ma ọ bụ ọrụ ahụ, belụsọ na ịnwere iji Windows na-arụ ọrụ GNU / Linux.
LXDE adịghị ike, ọ bụ, nke kachasị mma, adịghị arụpụta karịa gburugburu desktọọpụ ndị ọzọ, mana echere m na ike abụghị naanị na ogo nke arụpụtaghị ihe, mana yana ọtụtụ ihe, dị ka ojiji, nnweta, akụkụ anya .. .
Ma, ọ bụ na arụpụtaghị dị ka echiche gị nke arụpụtaghị, nke na-apụtaghị na ị mejọrọ, mana maka m ihe na-arụpụta ihe bụ ngwa nke na-enye m ohere ịme ihe ụfọdụ ọsịsọ na ngwangwa, maka gị na PCManFM nwere mmanya nyocha. ọdịnaya ma ọ bụ ọchụchọ ma ọ bụ ọnụ bụ ọrụ
Kpọmkwem, ọrụ ndị na-arụ ọrụ na faịlụ, ebe nchekwa, folda dị mfe karị. Ka anyị kwuo na ị mepee PCManFM, ị ga-aga na folda nwere puku akwụkwọ PDF, ị bido dee aha ya na ihe ị pịnye ga-adabakwa na nke mbụ. Na Dolphin iyo, ka ị na-ede, akwụkwọ ndị ọzọ na-apụ n'anya, na-ahapụ naanị ihe ndị na-adaba ... Gịnị ka i chere dị ọsọ ọsọ ma rụpụta ihe?
Ekwenyeghị m na gị ma ọlị banyere Windows = Nrụpụta. Iji malite, Windows Explorer na-asọ oyi, ọgbaghara, a na-egosipụta ihe niile ahụ n'ụzọ mgbagwoju anya, ọ bụghị ihe omimi, o nweghị taabụ ma ọ bụ ogwe ọzọ. Ọ dị mfe iji PCManFM ma ọ bụ Thunar karịa Windows Explorer, iji nye gị ihe atụ.
Ka anyị hụ, ọ bụrụ na ị were naanị akụkụ ahụ nke paragraf ahụ, ọ na-enweghị uche, ma ọ bụ kwekọọ na ihe ị chere, mana akụkụ nke ọzọ bụ isi okwu m, ha bụ ọrụ, ee, mana ọrụ ndị ọzọ, ọ bụghị ihe na m ga-enwerịrị PCManFM ga-enwe ee ma ọ bụ ee, ọ bụrụ na ọrụ ndị ahụ ị na-ekwu na-enyere gị aka ịmịkwu ọrụ, nke ọma, mana a maara na ha na-emetụta arụmọrụ, na LXDE bụ ka ọ dị mfe ma dịkwa mfe, ọ bụghị arụpụta, ma ọ bụ Ọ bụghị yana gburugburu ebe ndị ọzọ, ọtụtụ oge enwere mmemme dị mfe, ọkụ na arụpụta yana oge ndị ọzọ enweghị, n'ihi na ọ na-esiri ike ịchọta nguzozi zuru oke n'etiti ihe ọkụ (nke na-enwekarị obere ọrụ, nhọrọ ma ọ bụ atụmatụ) na ihe na-arụpụta ihe.
Ekwughi m na Windows bụ otu ma ọ bụ kacha arụpụta ihe, mana na ọ bụkarịrị ka a na-ejikarị ụlọ ọrụ arụ ọrụ, nke apụtaghị na ịbụ onye akachasị eji, ọ kachasị arụpụta. Explorer Ọ na eme nzuzu, ma ọ bụ ihe ndị kasị mee, nke na-apụtaghị na ọ bụ ihe na-arụpụta ihe.
Ọfọn, m na-eji LXDE na dịka njikwa faili m na-eji Nautilus ka ihe PCmanFm gwụ, na m onwe m na-ahọrọ GNOME, na na ọ bụghị maka onye ọrụ ikpeazụ, ọ bụ ụgha nke ndị ahụ, ọ bụ gburugburu maka onye ọrụ ahụ ị chọghị ịga pimp ihe ọ bụla, ọ zuru oke maka onye bịara ọhụrụ na Linux
Enwere m mmasị n'isiokwu a, na ilele weebụsaịtị gị ma ọ bụrụ na m hụ ahụhụ, ị ​​hụrụ obere onye onye edemede ahụ bụ, ya bụ, obere obere igbe na njedebe ị kwesịrị ịdebe ya, kama tinye ebe ọzọ onye dere ya, M dịka ọmụmaatụ ga-etinye ya n'akụkụ tebụl ịgụ.
Banyere isiokwu ahụ n'onwe ya, KDE bụ ugbu a kachasị mma ma zuru oke, ọ bụ ezie na m ga-achọ ka ọ meziwanye ụfọdụ ngwa KDE, enweghị m mmasị na ihe ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, Dragon Player, ma ọ bụ VLC, na eziokwu bụ, Achọpụtara m ụzọ ọzọ dị mma dị ka ndị na-egwu vidiyo na Qt, Bangarang adịghị adọta uche m ma .. ọ bụrụ na ị maara ndị ọzọ, m ga-enwe ekele maka ya.
Daalụ maka ntụnye ahụ. N'ezie, anyị echeworị banyere itinye onye edemede ahụ n'elu .. 😀
Banyere KDE, enwere m mmasị na VLC m ka ọ dị, na achọpụtara m Bangarang na m hụrụ ya n'anya 😀
Ka anyị hụ, ọ bụghị na enweghị m mmasị na ha, ọ bụ na ha abụghị ndị ọkpụkpọ vidiyo GNU / Linux nke kachasị amasị m, echere m na m gwara gị, na Gnome, ahụrụ m Totem n'anya, ọ bụ ihe onye ọkpụkpọ kwesịrị ịbụ maka m, nhọrọ ndị dị mma ma dị mkpa, interface dị mfe ... Ana m achọ ihe yiri ya na KDE, ha abụọ karịrị akarị, na enweghị m mmasị na Player Player.
Bangarang abụghị onye ọkpụkpọ vidiyo na-adịghị mma, mana ọ bụ onye ọkpụkpọ egwu na onye nhazi nke ọba akwụkwọ egwu, ọ bụ ya mere na achọghị m ya, m gafere mmemme abụọ, ọ bụrụ na Amarok emeworị ọrụ nke ịkpọ egwu nke ọma, gịnị kpatara m ga-eji enwere ihe ọkpụkpọ ọzọ na -emepụta ya maka m, mana na m na-ahazi ya na-ezighi ezi?
Amarok ma ọ bụ Clementine maka egwu, yana VLC maka vidiyo, ka m na-aga n'ihu nyocha m maka ezigbo ndị egwuregwu vidiyo dị mma maka KDE.
chukwuebuchu (@ oluchi22) dijo
Gbalịa SMPlayer masịrị m ya nke ukwuu ma ejirila m VLC mee ihe ụbọchị m niile.
Zaghachi truko22 (@ onyinye222)
Ekele dịrị m ndị tinyere, ọ bụ ezie na onye na-egwu egwu m anaghị enwe mmasị na ntanetị, ọ dị ka VLC, jọrọ njọ ma nwekwaa oke ibu na nhọrọ.
Gbalịa SMPlayer 😉
Na na na, mma m na-agbalị ya it
Can nwere ike ịnwale kaffeine, umplayer, kmplayer, playbak, bakaar, loopy, ha niile mara mma kde vidiyo.
Daalụ maka ndepụta ahụ, ana m ekwe nkwa ilekwasị ha anya 🙂
Ọfọn, nke bụ eziokwu bụ na kemgbe m chọpụtara SMPlayer achọghị m ịlaghachi na VLC.
M ga-eme ka njikọta ya na KDE pụta ìhè, onye njikwa isiokwu ya (Ọbụna na-ebudata ha) yana ịmịpụta vidiyo na-aga n'ihu ebe m kwụsịrị (adịghị adị na VLC)
Zaghachi Miguel Ángel Martínez
Ọ masịrị m onye ọ bụla belụsọ lxde.
Agbalịrị m cinnamon, m na-eji ịdị n'otu, ana m eji shei gnome, ọ masịrị m mana amaghị m otu esi ahazi ya ka ọ maa mma.
N'aka nke ọzọ, KDE bụ otu n'ime ndị m na-ahụ ma echetakwa windo na ọ na-enye m ntakịrị ọjụjụ, mana anaghị m agọnahụ na ọtụtụ desktọọpụ kde m hụrụ mara mma, mana amaghị m etu ha si jikwaa ya. , ma nke bụ na otú o si na ndabara (chakra, na ndị ọzọ na livecd distros na kde) M na-amasị ya na niile 🙁
Ọ bụ eziokwu. Nke a na-agwa gị site na onye na-enweghị mmasị na ọdịdị na mmetụta nke KDE na ndabara, mana dị ka Xfce, KDE nwere ike ịhazi gị ka ọ masịrị gị na ọbụnadị mee ka ọ dị ka ebe desktọọpụ ọ bụla.
KDE na Xfce bụ ndị enwere ike ịhazi nke ukwuu .. 😀
Na LXDE kwa. O nweghi otutu ihe eji emeputa ihe iji mee ya, mana enwere ike hazie ya, o nwere ike, na otutu.
Ma, ị na-emefu obere ọrụ, echere m .. Enwere ihe ndị ị ga-etinye aka na faịlụ .gtkrc-2.0 ma ọ bụ gtkrc.mine, dịka ọmụmaatụ.
Ee, ọ bụ eziokwu na ịhazi faịlụ ederede na-ewe oge karịa ma ọ bụrụ na ejiri ngwa ọrụ eserese mee ya. Ugbu a, ebe ọ bụ na abụghị m otu n'ime ndị na-enwe mmasị ịnwe desktọpụ dị iche kwa izu, ana m eme nhazi ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu oge, n'oge ntinye. Mgbe ahụ, mgbe ọ masịrị m, echefuru m ịhazi desktọọpụ (n'ọtụtụ ngbanwe akwụkwọ ahụaja).
Na mgbakwunye, mgbe m hụrụ otu ngwa ngwa LXDE si arụ ọrụ ma e jiri ya tụnyere gburugburu ebe ndị ọzọ, enweghị m nwute na m gafere ụdị nhazi dị mgbagwoju anya karị, n'ihi na nhụsianya nke gburugburu ebe obibi na-akwụ ụgwọ maka mgbochi ọ bụla ọzọ ọ nwere ike ịnwe ... maka m, n'ezie.
na taringa enwere post to tune kde ezigbo mma.
Njikọ ahụ bụ? Daalụ 😀
Ọ bụ eziokwu na KDE zuru ezu karịa mana ka ọ zuru oke, ọ dịkwa oke arọ ọ bụ ezie na ha jisiri ike nye ya ụfọdụ ọkụ kemgbe ụdị 4.0. Enwere m olile anya na ugbu a na ịzụta Digia site na Qt ụzọ KDE ga-edebe n'ụzọ ziri ezi n'ihi na ọ na-awụ akpata oyi n'ahụ na ugbu a mgbe ha jisịrị ụkwụ ga-amalite site na ncha ma ọ bụrụ na ndị nwe ha ewere ụzọ ọjọọ. ọ bụrụ na m ga-ahọrọ gburugburu ebe ọzọ na-abụghị LXDe m ga-anọ na XFCE mana dịka m kwuru… nke ahụ bụ uche m.
Ọ bụrụ na ị maara. Ugbu a, m na-eji KDE na netbook ọrụ m. KDE na-erepịa m otu ihe ahụ (oge ụfọdụ obere, oge ndị ọzọ karịa) karịa Xfce, na ọtụtụ, ihe na-erughị Gnome ... Kedu ihe ị chere?
Enyi, anyị na-asọpụrụ echiche gị, n'ezie anyị na-eme n'ihi na uto: agba Colo
M na-eji KDE na XFCE, nsogbu m na KDE bụ na CPU m na-agbapụ ma onyogho a na-efegharị, n'ihe gbasara oriri nchekwa enweghị m nsogbu. Do nwere echiche ọ bụla maka ihe kpatara nnukwu CPU a nwere ike ịbụ?
Gbalịa iji usoro ihe nlere anya na ịtụ site na elu ruo na cpu iji hụ ihe kachasị eri, ị nwekwara ike gbalịa ịkwụsị nepomuk ma ọ bụ akonadi. Nke mere na ọ na-erepịakwa obere cpu ị nwere ike ịga na mpụta nke ngwa, ịke, ezi ukpụhọde na graphic mmetụta họrọ obere CPU. Mgbe ụfọdụ, ọ na-emebi site na iji ụfọdụ 3rd party tmb plasmoid.
Site ndabara na Filiks na-nyere iwu site CPU oriri.
Na m chere na ọ dabere nke ukwuu na Akụrụngwa ị na-eji.
Enwere m AMD Athlon 64 × 2 Dual isi 3800 + 2Ghz processor na 4Gb nke RAM.
😮 kpọrọ?, Kedu netbook ị na-etinye na / ma ọ bụ nkọwa ?? na kedu distro tb ???
iji hụ ma ọ na-arụ ọrụ na m: p
Nke a bụ netbook ya: https://blog.desdelinux.net/unity-en-netbook-hp-mini/
Ma ọ na - eji Nnwale Debian (Wheezy ugbu a).
HP Mini 110 ya na 1Gb nke RAM .. 😀
Enwere m mmasị na LXDE, akụ ole na ole ọ na-ere bụ ihe ịtụnanya na maka m ọ nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ, F4 iji nweta ọnụ site na folda ọ bụla, ibe edokọbara, naanị site na ịpị m nwere ike ịchọ faịlụ ahụ n'ime folda m nọ, wdg.
M ka kwetara na ọ bụghị maka onye ọrụ novice na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịmasị ịdị mfe nke LXDE.
Maka ndị na-achọ obere desktọọpụ, m na-egosi gị nseta ihuenyo nke KDE mageia 1 mgbe m nwere ya na pc m:
Mgbe ahụ ekwula na ị gaghị enwe KDE mara mma.
N'iji okwu nke gara aga, aro m dị umeala n'obi maka imewe weebụ, nke m hụrụ n'anya:
- mee ka url belata mgbe ị na-ebipụta akwụkwọ, nke ahụ anaghị eme dịka m kwuru na mbụ na-ahapụ ahụ
- onye edemede nke post adịghị mma, dị mma karịa ma ọ bụ gosi ya karịa
Ekele m na nhazi ọhụrụ ahụ, enweghi ọtụtụ imeziwanye, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke.
Shortening URL dị ezigbo mma, ị ga-ahụ ma ọ bụrụ alaintm (onye mmemme isiokwu) nwere oge ugbu a iji mee ya, n'ihi na nke a bụ mmejuputa iwu nke na-anọghị na atụmatụ yana o nwere ihe ndị ọzọ ịme hahahaha.
M na-eji KDE na Mageia 2, enwere m obi ụtọ na ya, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ ọtụtụ na ntakịrị nhọrọ gbasasịa na-emegharị ya, mana m na-arapara na ya naanị n'ihi nhọrọ nhazi ya.
M ga-achọ ịgụ gbasara nhọrọ ndị ọzọ, ugbu a, m na-eche maka itinye ihe ọmụma, nke ọ bụ ezie na n'ụzọ ụfọdụ abụghị nke dị elu, n'oge na-adịbeghị anya, ha na-arụsi ọrụ ike, ọ dịkwa oke nhazi (belụsọ menu). Na na ị na-atụ aro gburugburu ebe ndị ọzọ, anụwo m banyere Openbox na nkwekọrịta, mana n'ime ndị a ahụbeghị m ọtụtụ ihe n'ime onwe ha.
ekele maka ozi taa
Ọ fọrọ nke nta ka m kelee Ubuntu maka itinye Unity na ime ka m chọọ distro ọzọ, n'ihi na ebe m wụnye Xubuntu enwere m obi ụtọ, laptọọpụ m dị iche, ọ dị okomoko. Naanị ihe dị mma maka uto m bụ na ọdịdị nke isi panel ahụ masịrị m Gnome Classic karịa Ubuntu. Maka ndị ọzọ, ee, Thunar nwere ike ọ gaghị enwe ntakịrị mana mana enwere m ọtụtụ.
Echere m na ọ nweghị nke dị ike karịa nke ọzọ, dị ka onye edemede ahụ gosipụtara, ọ bụ ihe dị ụtọ na ebumnuche, ebumnuche. A ga-enwe ụdị arụmụka ndị a mgbe niile, ọ bụghị naanị na gburugburu desktọọpụ, sistemụ arụmọrụ, akwụkwọ akụkọ, chịngọm, tebụl, iPhones, PC, wdg.
Maka m nke kachasị mma ma mara mma bụ KDE mana anaghị m eji ya ebe ọ bụ na ọtụtụ nhọrọ na-eme m ka anya nju.
Oche ọkụ na ihe achọrọ m n'aka na-amasị m, nke m na-eji Xfce nke m hụrụ n'anya.
M na-ejikwa Gnome 2 si SolusOs ma ugbu a, m na-anwale xlde nke na-adịghị njọ ma ọlị, ọ na-ezutekwa ihe m chọrọ.
Unitydị n'otu, Cinnamon na Gnome n'echiche m adịchaghị mma ma bụrụ nke a na-ahụ anya, tupu m jiri KDE mara mma ma dịkwuo irè, nke na-abụghị ikpe.
Ọ dị egwu dijo
M ga-enye KDE nnwale ọzọ, agụrụ m ọtụtụ nyocha dị mma n'oge na-adịbeghị anya.
N'aka nke m, ugbu a mụ na Mate na Compiz na ndụ na-atọ m ụtọ, dị ka a ga - asị na m ka nọ na Gnome2 ...
Edemede dị ukwuu, kwụ ọtọ, + 1!
N'ezie, m ga-anọrịrị n'etiti ndị fọdụrụ na 2% nke ndị ọrụ ebe ọ bụ na ọ bụ maka m ngwa kachasị mkpa taa ma na enweghị mgbagha nke m na-eji ọtụtụ -ndị m na-eji ọtụtụ, ekwesịrị m ikwu- bụ ihe nchọgharị ahụ: M na-eme mgbe niile nwere otu ma ọ bụ karịa ihe nchọgharị na-emeghe, ha bụ ebe m na-eji igwe.
Ee ee, ihe nchọgharị ahụ bụ otu ngwa eji eme ihe, mana na njedebe maka ihe niile ị ga-anwụ na Njikwa faili 😀
Ihe m masịrị:
- KDE (onye ọrụ ndụ niile, na onye nrụpụta).
- Unitydị n’otu (nwere nnukwu echiche, mana arụ ọrụ jọgburu onwe ya).
- XFCE ma ọ bụ LXDE (ha dị n'otu ọkwa, kwa mgbanwe).
- Cinnamon (otu agadi, ọ dịghị ihe ọhụrụ).
- Gnome (enweghị ike iji ya mee ihe).
@hipersayan_x you na-etolite na KDE? You ga-enwe mmasị ịmekọrịta na nkesa?
Kedu ihe ị chere gbasara MATE DESKTOP ??? Ahụrụ m ya n'anya. Gnome 2 ndụdụ olileanya ogologo ndụ. http://mate-desktop.org/
Maka ugbu a KDE bụ desktọọpụ kachasị mma maka m, ọganiihu ya dị ịrịba ama ma kwụsie ike na ọsọ, ọ dịkwa oke ma nwekwaa nhazi. Abụ m otu n'ime Gnome gbapụ na nsụgharị ya ugbu a, nke mbụ n'ihi enweghị isi ya maka pc nkịtị, nhọrọ nhazi ya ole na ole (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nil), na mgbakwunye na ọtụtụ isiokwu anaghị amasị m, na-agbakwunye ndọtị nsogbu na-ekwekọghị na ntụgharị nke nsụgharị ahụ, ewezuga na-eri ọtụtụ akụ karịa KDE. Ejiri m XFCE na MATE, mana ha emeghị ka m kwenye nke ukwuu. Ọ dịghịkwa mkpa ịgọnahụ na e nwere ezigbo Gnome ngwa, n'ọnọdụ m, m na-ahọrọ iji ngwa Gnome multimedia karịa ndị KDE. Otu ihe ahụ onye ọ bụla na-eji ihe dị ya mma ma kwekọọ na mkpa ya, KDE juputara nke m dịka desktọọpụ.
N’oge gara aga, a na m eji ụzọ abụọ ndị ọzọ akpọpụtabeghị ebe a, aguba-qt na elementrị (pantheon shell). Agụba (nke na-abụghị ebe desktọọpụ) Ana m eji ya dị ka ụdị kde na-enweghị kwin (Ana m eji igbe mmeghe) na -enweghị plasma. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma (ọ dị mma karịa plasma dịka ọ dị mfe) ma ọ na-eri obere (ọ na-eri ihe na-erughị 250 MB na ọtụtụ usoro kde malitere.
Pantheon bụ shen gnome ma ọ bụrụ na anaghị m ehie ụzọ, ọ na-eji gala dị ka njikwa window, faịlụ dị ka ihe nchọgharị faịlụ, plank dị ka ọdụ ụgbọ mmiri na ọtụtụ mmemme ndị ọzọ nke otu elementrị mepụtara. N'ihi na m na ọ bụ nanị oké, ndị kasị mma na mara ndabere gburugburu ebe obibi na m hụrụ ruo ụbọchị na mgbakwunye na nke na-ezi ike (ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ na Alfa ma ọ bụ beta), na ọ bụrụ, ọ na-enweghị ọtụtụ customization nhọrọ.
Agara m anwalewo ya, m ga-ekwukwa na ọ nwere ike ịbụ nnukwu asọmpi na LXDE. Ọ nwere ụfọdụ ngwaọrụ (dịka ọmụmaatụ, na netbook ọ dịghị ihe iji anya nke uche batrị batrị, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ahụghị m ya), mana n'ozuzu ọ dị m ka ọ nwere ọdịnihu, ọ bụ ezie na n'oge na-adịbeghị anya ahụbeghị m ozi banyere oru a.
Banyere pantheon, anaghị m ejikarị Gnome Shell arụsi ọrụ ike maka ụfọdụ ihe kpatara ya, agbanyeghị, ọrụ elementrị na-echegbu onwe ya mgbe niile banyere ị nweta ọkwa dị mma na ngwa ya, yabụ echere m na ụdị anụ ahụ ga-enye ọtụtụ ihe ikwu banyere.
Banyere isiokwu ahụ, agbalịrị m desktọọpụ ekwuru na ọ bụ ihe ijuanya nye m na Gnome 3 akpasuola ọtụtụ Shell na nkà ihe ọmụma nke iji otu isi. Echetara m mgbe ha kwuputara na mbipute 2.30 ahụ ga-abụ nsụgharị 3 (ọ bụ ezie na ọ mechara bụrụ 2.32), ha kwuru na mgbanwe ahụ ga-adị obere nsogbu, ikekwe na-ezo aka na ihe mere na KDE n'oge ahụ.
N'uche m, mgbanwe ahụ abụghị ihe mberede, kama ọ bụ ntakịrị ihe na-ewe iwe, ọkachasị na enweghị ụfọdụ arụmọrụ, ọ bụ ezie na ka m na-emeghachi ya, anaghị m eji ya arụ ọrụ nke mere echiche m dị oke arụmụka.
N'ikpeazụ, ịza ajụjụ a na post, KDE bụ desktọọpụ m kachasị amasị, maka ọtụtụ ihe kpatara na ọ bụ ezie na enwere ihe ndị na-adịghị m mma (dịka omume nke ọkwa na ọnọdụ ụfọdụ), enwere ndị ọzọ mgbe niile ma ọ bụ onye nrụpụta iji kpọtụrụ na.
Ndo Vicky, mana ị nwere ike ikwu nke distro ị na-eji yana ụfọdụ ozi maka otu esi etinye Pantheon Shell?
Ọ bụghị n'efu, eji m Enlightenment (ma ọ bụ E17) ogologo oge ma ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu maka m. Ọ bụ otú configurable, Ọ na-arụ ọrụ ụzọ m chọrọ. Enwere m nnukwu nkwanye ùgwù maka XFCE, mana E17 dị ka nke ahụ. KDE nwere ngwa ndị dị egwu, dị ka K3B dị ike, etinyere m ha naanị ma ha ji ike dị ukwuu na-arụ ọrụ n'ụzọ dị ebube mana na-efunahụ ọsọ m chọrọ. Pcmanfm na-enye m ihe m chọrọ dịka onye njikwa faịlụ na m na-esi na Gnome gaa Gimp yana mmemme ndị ọzọ edere na GTK2o3. Eziokwu bụ na enweghị m ihe ọ bụla ga-emere ndị nwe anyaụfụ, ha na-enye m mmemme m chọrọ, na-eme, yana E17, ebe kachasị mma m nwetagoro, na-eme ngwa ngwa ma nwee ike ịhazi. Ọ dị oke njọ na ọ hapụrụ ya. Gbalịa ya, ọ bụ eziokwu na ọ dị ezigbo iche na mbụ, mana ọ bara uru iwe nkeji ole na ole iji hazie ya.
Daalụ ma ọ bụrụ na ị gụọla okwu a niile. 🙂
Enweghị m ike ikwu ọtụtụ ihe gbasara E17 n'ihi na m gbalịrị ya nke ukwuu, obere .. N'ezie, amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ Desktop Environment ma ọ bụ Windows Manager ...
[Ọ masịrị m]
Ejikwala m e17 na ọ dị oke ọsọ, ọ bụ ezie na anyị ga-eme ihe n'eziokwu na ọ ka enweghị ọrụ, mana ọ nwere ike ịsọ mpi na LXDE na XFCE n'enweghị nsogbu. Ihe mebiri m bụ mgbe m na-ahazi menu (ọ ga-amasị m ka ọ jikwa iwu m chọrọ) na mkpebi ihuenyo na oge ụfọdụ ọ naghị edebe ya wee laghachi 800 × 600 ...
Nwere ike ikwu ntakịrị ihe gbasara ahụmịhe gị na E ??? Naanị ịmalite site na Mageia, m na-esi na iji Debian na nkwekọrịta pụta, m ga-etinye E17.
Ezigbo ihe mgbaru ọsọ .KDE kacha mma, XFCE nkwanye ùgwù m.
Ezi post. Enwere m mmasị na KDE maka otu ihe kpatara ị kpọtụrụ aha (ọkachasị mma), mana n'ihi ụzọ ọ na-ewute arụmọrụ m mechara hapụ ya (oge ikpeazụ m jiri ya bụ debian, nke m chere na ọ bụ distro dịkwuo ike , ma ọbụna debian KDE mechara dị arọ). Emechara m nye Linux Mint ohere ọzọ, na Cinnamon, mana ọzọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu ihe, na arụmọrụ nke arụmọrụ n'ihi ihe oriri na-ejedebe na-eriju afọ. Mana tupu ịtụfu Mint, oge a ekpebiri m ịnwale XFCE (afọ ole na ole gara aga, ejiri m ya na Xubuntu, n'oge ahụ enwere m ahụhụ na ahụhụ na Thunar nke kwụgidere kọmputa m), eziokwu ahụ bụ na enwere m obi ụtọ na arụmọrụ ahụ nke na kọmputa m., nnọọ ìhè na oké arụmọrụ. Site na omume (na n'ihi na enwere mmemme ndị na-anaghị eju m afọ na Linux ma ọ bụ n'ihi enweghị nhọrọ nha anya) M na-eji Windows 7. Ma ọtụtụ izu gara aga, m na-eji Mint na-aga n'ihu na XFCE, na oge ụfọdụ m na-alaghachi na Windows (maka ụfọdụ kpọmkwem mkpa). PCManFM dị mma, nke bụ nke m na-eji. Ikekwe maka gị nke a bụ ihe nzuzu: Abụ m (ọjọọ) iji na-ege egwu na ngwa mgbakwunye a na-akpọ "Enhancer 0.17" nke na-eme ka ụda ahụ ka mma n'ụzọ mara mma, ọ bụrụ na na Linux enwere ọkpụkpọ na-akwado ya ma ọ bụ nke nwere nha anya zuo ezu, ike mgbe ahụ m gafere na linux ga-abụ nke ikpeazụ. Ka ọ dị ugbu a, a na m ege egwu na Aimp site na Wine ... Oge ole na ole gara aga, enweghị m ahụ iru ala, obi ụtọ na afọ ojuju n'iji linux. Obi dị m ezigbo ụtọ ịmata na debian kpebiri na XFCE, njikọ ahụ ga - eme ka kọmpụta dị ike ... M ga - alaghachi na debian. Cheers
Nweghị ike ikwu na Gnome na Shell ya bụ ngwa ọjọọ dị anya na ya.
Ee ị nwere ike ịsị na ọ dị njọ, n'ihi na ọ dị njọ, ọ na-akawanye njọ.
Ma eleghị anya, ọ dị gị njọ n'ihi na ọ hapụrụ echiche nke panel + desktọọpụ na akara ngosi + ndepụta ahịa mana maka m ọ bụ ọganihu, ozugbo m nwara ịrụ ọrụ na ya, ị ghọtara ihe kpatara ihe ji dị.
Naa atụmatụ pere mpe + pere mpe nke nwere ike ibuwanye + ka ọ dịkwuo arọ + inweta obere ọrụ na obere ọrụ = Njọ
LOL !! Agaghị m achọ ịkatọ Gnome nke ukwuu, mana ọ bụ eziokwu, aghọtaghị m ihe kpatara na ọ pere mpe karịa. na mgbe ahụ anyị ga-eji ngwa na-akwadoghị ngwa yana ndọtị, nke kwesiri itinye ya na ndabara ...
Gnome 3 dị nwute, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime 4 kachasị njọ !! Na na amaghị m banyere XFCE ...
Ihe ngosi mara mma m na-eji GNOME-Shell na Fedora 17 Enweghị m ọtụtụ ihe onwunwe 1 GB nke RAM na Pentium 4 processor mana n'agbanyeghị na ọ na-arụ ọrụ nke ọma: D. Chagbanwe isiokwu ahụ, ị ​​maara na a ga-enwe ụbọchị Onye Mmepụta EFL na Barcelona Spain? http://www.enlightenment.org/p.php?p=news/show&news_id=49 Ọ bụ Nọvemba 5, ọ dị ka ndị nwere nghọta na-etinye batrị batrị n'ụzọ ahụ ha gosipụtara na ha na-arụ ọrụ na Enlightenment 18 http://trac.enlightenment.org/e/roadmap Enwere m olileanya na ị ga-eleba anya na mbipụta ya dịka akụkọ.
XFCE RULLZZZ, ihe m na-ekwu bụ na m gabigala onye ọ bụla, ọ bụ ihe ịtụnanya mana ọ na-eri ihe onwunwe na maka m na anaghị m enwekarị akwụkwọ ndetu jikọtara na ike, ndụ batrị dị ezigbo mkpa, ugbu a na xfce + debian ọ na-adị 5: 30, na KDE + Arch ọ nọrọ 2:40, mana enweghị obi abụọ KDE mara mma ma dịkwa nkenke, ugbu a XFCE na-atọ ụtọ nke ukwuu ebe ọ bụ na ị ga-enwe ezigbo oge ịhapụ ya ị chọrọ, elav dị ka ihe dị ezigbo mma mgbe niile na blọọgụ dị mma mana enwere ihe m na-achọghị ka m chọpụta na ogwe aka nri dị oke ukwuu ma ọ bụ na obere ngebichi ọ na-ele nnukwu hehehe, ekele ụmụ okorobịa na ekele maka ọrụ gị !!
Ọ bụrụ na ị maara na opekata mpe karịa na KDE na Debian, achọpụtara m na oriri batrị dị elu karịa nke Xfce na Debian 😕 Amaghị m, ma eleghị anya ha bụ echiche m 😀
Ọ bụ na oriri kwesịrị ịdị ukwuu mgbe ị na-eri ọtụtụ akụ, ọ dịkarịa ala maka m na njiko kde A gbara m na 400 mb nke isi oriri, m na-ekwu na enweghị ihe ọ bụla na-agba ọsọ, yana ya batrị dị ihe dị ka elekere 2:40, ugbu a anwabeghị KDE na debian, aga m ahụ ma m ga-agbadata ọrụ na ngwụcha izu ma aga m agwa gị emesịa etu mụ na ndị otu m si eme, na-ekele Ariki
Ọfọn, ọ masịrị m na KDE anaghị arụ ọrụ nke ọma na Debian, mana ugbu a, m na-eji KDE na Mageia na m na-eme nnukwu !!
Ndewo, ezigbo edemede. KDE bụ desktọọpụ zuru oke ma jikọtara ọnụ, agbanyeghị na anaghị ahụ ya ma ọlị ma ọ dị nwayọ imeghe ngwa karịa gburugburu ebe ndị ọzọ yana n'ihi na ọtụtụ nhọrọ na ebe ọ bụla ha na-eme m ihe nro. XFCE bụ ezigbo desktọọpụ mana ọ nweghị ihe ngọpụ maka inwe ya ezughi oke ebe ọ bụ na ogologo oge ọ kwụsịrị ịbụ desktọọpụ dị fechaa, ọ dara na Thunar, yana ụzọ mkpirisi ụzọ na igodo ọrụ yana nhọrọ ndị ọzọ pụrụ iche, gnome adịghị arọ, nye m Ọ na - amalite m ihe na - erughị 300 MB na agbanyeghị na ọ bụ ngụkọta mgbanwe na echiche nke desktọọpụ (m ga - asị na ọ bụ naanị desktọọpụ mbụ gburugburu ebe obibi) ọ na-arụpụta ihe karịa iji keyboard. LXDE bụ desktọọpụ dị fechaa nke kwesịrị ịdị, agbaghara m enweghị njikwa njikwa ya na ihe ndị ọzọ makana o kwesiri ịbụ maka PC ochie.
Ihe ọ bụ ịnwe ezigbo kọmputa, ọ bụghị eziokwu @Elav, ugbu a ị na-etinye gburugburu desktọọpụ ọ bụla n'ọnọdụ ya, o juru m anya na ị na-ekwu okwu ebube nke XFCE (ọ kwesịrị ha, ma ọ bụ karịa), ole na ole "nkọcha" maka Gnome 3 (kwenyekwara) na KDE fọrọ nke nta ka echefuo.
na ihe niile maka inwe oke gigabytes 4 ahụ, ị ​​na-eji KDE ọzọ, ana m anabata gị na KDE club !!!!
Hahahaha, n'eziokwu, enwere m KDE na Netbook kwa, tinyere Xfce n'ezie ...
Akụkọ elav dị ezigbo mma, n'oge m dị mkpirikpi na linux m nwara gburugburu anọ ahụ, nke kachasị amasị m bụ xfce, ọ masịrị m n'ihi na enwere m ike ịhazi ya dịka m si masị ya ma ọ naghị eri ihe kde , naanị otu nke anaghị amasị m anọ bụ gnome.
KDE desktọọpụ asụsụ ahụ.
XFCE na onwu, obu ihe m choro, no ozo, no less.
Anaghị m eji dolphin, nautilus ma ọ bụ ọnwa. ezigbo ọnụ na voila. Achọghị m kate ma ọ bụ gedit, vim na voila. maka ihe ọ bụla ọzọ m chọrọ bụ imegharị, megharia windo, kwaga n’etiti windo ma nwee ike ime ya naanị iji keyboard (google chrome + vimium to navigation) ị chọrọ n’ezie ịmị mkpụrụ? enwere ọtụtụ gburugburu, dị mma karịa ndị akpọrọ ime nke ahụ. Asingba ụba arụpụtaghị ihe na-asị goodbye na òké na-enwe ike ime ihe niile, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta niile na keyboard, ihe dị mkpa bụ na ọ bụ configurable ezu na ị nwere ike họrọ na nke igodo na-arụ ọrụ 😉
Ee, echere m na ịsị na desktọpụ dị otu a na-arụpụta ihe bụ enweghị isi ebe ọ bụ na nrụpụta na-adabere na onye ọrụ, kama Elav na-arụpụta ihe karịa KDE, desktọpụ gị, mụ na Gnome Shell, onye ọzọ nwere lxde na na.
Echere m na ọ bụ eziokwu.
LB UR. dijo
Ihe kacha mma na LXDE bụ KNOPPIX .. naanị n'ihi na ị nwere ike ijikwa ngwa KDE na Gnome na-arụ ọrụ zuru oke. Enyere m nke a na p4 2.26 na 700mb nke obi umeala
Taa naanị m na-eji windo, mana m na-atụ anya Mageia 3 na KDE 4.9 na ịlaghachi na linux dịka n'oge ochie m.
Zaghachi KWES URL
Ọ na-aga na-eche ogologo oge 😉
Ebeekwa ka ndị njikwa windo, igbe mbata, fluxbox, ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ịkwa ụda dị ka dwm.
Ọ bụghị n'ihi na ha nwere nhọrọ ole na ole na ndabara (n'ozuzu ha nwere ike ịhazi karịa nnukwu DE), ọ pụtara na ha adịchaghị ike, ma ọ bụ na-arụpụta ka ị na-akpọ elav, na ndị a abụghị naanị iji PC na obere ego.
Edemede a bu ihe banyere Desktọpụ Gburugburu, ọ bụghị Windows Manager. Ọ bụ eziokwu na OpenBox, Fluxbox ... wdg ị nwere ike ịnwe ọfụma Desks, mana ha abụghị Desktọpụ Gburugburu dị ka ndị a .. 😀
Enlightlyment abatakwa na desktọọpụ ??? Ma otu onye ọzọ obi abụọ, olee ndị ọzọ tebụl e nwere na-ike gbalịa? Ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị ịmatakwu ihe banyere isiokwu a, inye ndị a na-akpọghị aha ha ohere, nri?
M nwere otu obi abụọ ahụ gị. Dika ihe ekwuru na akpo Desktop Environment, ama m ka ndia na RazorQT, amaghim ma odi ndi ozo.
Ugbu a, echere m na KDE bụ otu ma ọ bụ gbaa ọkụ karịa Gnome.
E wezụga ịbụ onye ahaziri iche na ndị ọzọ mara mma 😀 hahahaha.
Ezi ederede zuru oke, mana m ga-ekwenyeghi banyere LXDE.
Maka m, LXDE dị mfe ịhazi n'adịghị ka gburugburu ebe ndị ọzọ. Dị ka ihe niile ọ dị nfe dị ka ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ ịchọ ntanetị.
Ndị ma m maara na m na-eji LXDE, ewezuga na m na-eji Fluxbox (nke mụ na ya nọrọ kemgbe afọ 4) karịa Openbox na Thunar karịa OpenBox na Compton ịgbakwunye ụfọdụ ụlọ ọrụ.
Gịnị kpatara m ji eji ya? Naanị ihe ọ dị m mkpa ka m mee, na-ejighị nnukwu RAM na CPU (Compton na-erepịa naanị 2Mb nke RAM).
Maka ụfọdụ ka ha hụ na LXDE ma ọ bụ Fluxbox adịghị njọ, ahapụrụ m gị 2 nseta ihuenyo nke desktọọpụ m:
Igbe ozi: http://fav.me/d3iilrh
Ọ dị mma, maka afọ ole na ole abụwo m onye ọrụ linux 100%. Nke mbụ maka ihe omumu, Kọmputa Injinia na n'ihi na ọ masịrị m nke ukwuu. Ugbu a, ihe ndị dị mfe na-amasị m, enweghị m nsogbu na ịnwale ruo mgbe achọtara ihe masịrị m.
Amalitere m na Ubuntu + Gnome ruo mgbe ha kwagara Unity. Emechara m mara ebe a. M nwara Cinnamon na MATE. Na mkpokọta, mgbe m nwesịrị ọtụtụ nnwale m kwenyere na m na-ahọrọ MATE ma ọ bụ Cinnamon, dabere na achọrọ m ihe dị mfe ma ọ bụ ihe mara mma.
Dị n'otu dịkwa mma, mana ebe ike gwụrụ m ịmegharị kwa ọnwa 6, ana m anọnyere LMDE + MATE.
Kedu ihe ị chere gbasara gburugburu ebe ndị a? Karịsịa MATE nke bụ ndụdụ nke Gnome3 na Cinnamon nke bụ ndụdụ Gnome2. Nke a ọ bụ ụzọ Gnome kwesịrị ịgbaso? Ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, emeghewo ọnụ ụzọ maka ya?
Ọ bụrụ na ị jụọ m, echere m na MATE bụ ọrụ ọ bụ ezie na ọ dị mma maka ọtụtụ ndị ọrụ, nke nta nke nta a ga-echezọ ya, ebe ọ bụ na ịla azụ ga-eri ya. Dị ka o kwesịrị, Gnome 3 kwesịrị ịchacha mma na ọnọdụ Classic ma ọ bụ FallBack.
Onwere (s) ndi ozo m chere ga-enwe ihu oma ahu.
Oche kacha mma, n’enweghị obi abụọ, nke m na-eji. Ọ bụ ìhè, nkasi obi na ukwuu modifiable 😉 http://i.imgur.com/tN9Gx.jpg
Hahaha, enwere ike gbanwee ya ..
LOL !! Chọpụta !! Mana m na-eche na ị nwere ike ịgbakwunye ngwa na nsogbu ga-abụ mgbe mmadụ batara "na desktọọpụ gị" wee megharịa ntọala ya!
Gnome Shell, ebe ọ bụ naanị desktọọpụ desktọọpụ (ewepu Unity) nke m ji.
* Ruo mgbe ebighi ebi Gnome Shell *
Ana m ele ọtụtụ KDEro anya, hehehe.
Maka m otu nke kachasị agbanwe agbanwe bụ XFCE ọ bụ ezie na ụbọchị ọ bụla ọ masịrị m ka m na-emeghe ihe ndị ọzọ
Echere m na e nwere n'ihi na ọrụ Gnome ahụghị amasị (ịhapụ ma ọ dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị), na ọtụtụ n'ime ihe anyị chọrọ na desktọọpụ anyị bụ njirimara, nhazi na nkwupụta ... ihe KDE na-enye nke ọma .. Na ikpe nke gburugburu ndị ọzọ na m na-achọpụta a adịghị ike mgbe, mgbe ị nwere dezie a nhazi faịlụ ozugbo na-eji ọzọ ngwa na / ma ọ bụ ndọtị, ọrụ ndị na-adịghị amasị "tinker", ọtụtụ ọgwụgwụ ọrụ na ha PC bụ naanị maka ihe aga-eme , ọrụ, na ntụrụndụ tụrụ ụjọ wee laghachi Windows ma ọ bụ chọọ ụzọ ọzọ. Ka m kọwaa, “tinkering” a na-atọ m ụtọ na kọmputa m, mana ọtụtụ mmadụ na-ahụ ọrụ na ihe niile m na-eme ma na-atụ ya ụjọ. Maka uto m, desktọọpụ kachasị mma ga-abụ nke na-enye ndị ọrụ njedebe aka ịhazi gburugburu ebe kachasị dị mfe ma kachasị mma, na mgbakwunye na ime ka ọrụ ha dị mfe (na ịghara inwe mgbagwoju anya na ọtụtụ nhọrọ, anya KDE)
Ndewo onye ọ bụla, anọwo m na-eji ọtụtụ nkesa na PC m ruo oge ụfọdụ ma ana m ekerịta ihe ụfọdụ na-ekwu, na mberede MATE gburugburu ebe obibi, ụfọdụ na-eche na ọ nwere ike bụrụ nke ochie ma ọ bụrụ na ị na-ele anya na a na-eji ya na ọkara Rolling ntọhapụ distro dị ka LMDE O nwere ike ịbụ na ọ bụ ya bụ ihe nrụpụta ahụ chọrọ, yana enwere ike ịsị na nke a bụ otu n'ime desktọpụ kachasị mma maka ndị na-eji Gnu / Linux maka oge mbụ, n'agbanyeghị na cinnamon na-amasị m na mgbakwunye ụfọdụ ị nwere ike ime ka ọ dị ntakịrị ihe na mintmenu nke eji na MATE, akwara Gnome nwere ọtụtụ mgbanwe m nwere olile anya na n'ikpeazụ ọ nwere ike ịdị mma ọ bụ ezie na ọ ka bụkwa ọkacha mmasị m, mana dịka Elav si kwuo na ọ bụ ihe ụtọ na mkpa
Kde ka bụ desktọọpụ kachasị mma n'ihe gbasara arụmọrụ, mana n'ezie ọ bụrụ na anyị na Pentium IV nọrọ ruo mgbe ebighi ebi ọ bụ ihe ziri ezi na anyị ga-eji nwayọ ... 🙂
N'ikwu okwu banyere KDE, (nke m chere na obodo Linux n'ozuzu ha na-eleda anya nke ukwuu) Ana m ekekọrịta usoro Malcer na nka maka CHakara na-esote (na-apụta na nke a ma ọ bụ izu na-abịa):
A mma, nri?
Zaghachi Inti Alonso
Eche m !! KDM na KSplash bụ ihe masịrị m nke ukwuu, m ga-eche maka nsụgharị maka Megeia !!
M na-eji LXDE emeghị m agbanwe ya maka ihe ọ bụla, enwere ike ịhazi ya, ma eleghị anya maka ọhụụ ọ gbagwojuru anya na mbido mana mgbe ịmechara ya na nke mbụ ọ ga-abụ otu achịcha na ihe kachasị amasị m maka desktọọpụ ọkụ. na ọ na-enye ohere ka mmemme anyị rụọ ọrụ na mmiri karịa n'agbanyeghị ma ị nwere igwe dị mma. XFCE dị m ka ezigbo desktọọpụ mana lezie anya, ọ bụghị ọkụ ma ọ bụrụ na ịnwere igwe nwere obere ego echeghị m na ọ bụ nhọrọ kacha mma. Ejikwala m ICEWM, ọ dịkwa m ka ezigbo desktọọpụ dị oke mma, enwere ike ịhazi ma dịkwa mma nke ukwuu, ọ bụ ezie na m ga-etinyekwu oge na ya
Zaghachi ka ọ bụrụ cogan
Ekwenyere m na LXDE juputara na ihe sitere na Gnome, ma ewezuga nke ahụ iji kwadebe ya ịchọrọ ihe ọmụma gara aga iji gbanwee ya.
na Linux dijo
maka m KDE kacha mma bụ nsụgharị 3.5 ..
Nsụgharị nke taa adịghị m mma .. n’ezie, etinyego m 4.5 m chere ma ọ masịghị m. ọ dị nwayọ ...
Zaghachi na andlinux
Nke ahụ bụ ụdị 4.5 adịchaghị mma ịsị, ya bụ, anaghị ehicha ya ma ọlị ... 4.8 ma ọ bụ 4.9 bụ ihe ọzọ.
Ọfọn, m na-aga n'ihu na 4.3 !!! na m na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu ma ọ bụ ihe ijuanya, ihe niile na-arụ ọrụ na-eripịa m obere, dị ka Gnome 2.8
Abụ m onye ọrụ: slaxkware 12.2 KDE 3.5 .. Ngwa ngwa ngwa ma guzosie ike ...
MA TAA INWEE M UBUNTU Achọghị m ...
Eji m Gnome mee ogologo oge ... ọbụlagodi Gnome3 mana ụdị ọhụụ anaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ...
M nwara KDE na ihe niile gbanwere! Ọ bụ maa ndị kasị mma desktọọpụ gburugburu ebe obibi… ọ na-ele na-arụpụta ma zuru ezu… ị na-agaghị ekpe na na “efu ihe” mmetụta.
Agbalịrị m ya na Chakra, Sabayon, OpenSuse ma ugbu a na Kubuntu. Ejiri KDE wuru distros niile.
KDE kachasị mma, anaghị m aghọta ihe kpatara na ha enweghị ya dị ka desktọọpụ ndabara na ọtụtụ nkesa, ọ bụrụ na ha dị mma ma nwee ike ịkpụzi.
Ọ dị m ka na nke a bụ kpọmkwem nsogbu ahụ: nhọrọ ndị ọzọ ị na-enye ndị mmadụ, nhụjuanya ọ na-enye ha (nke ukwuu!) Ọ bụ ya mere ọtụtụ n'ime ndị distros ji ahọrọ ebe dị mfe ma pere mpe nke dịịrị ha mfe ịmụ na iji .
E nwekwara eziokwu: taa ọtụtụ ndị ọrụ desktọọpụ adịghị egwu n'ime usoro ha, ha na-eji ihe enyere ha na otu esi nye ya - nke a ga-abụ otu n'ime ihe ịga nke ọma nke atụmatụ Apple maka ngwaahịa ha?
KDE SC ga-anọgide na-abụ ebe a họọrọ maka ndị ọrụ toro eto ...
Ọ na - eme na ọ bụghị anyị niile nwere ike ịhazi, KDE nwere ọtụtụ ụzọ iji mee ya nke gị. E wezụga nke ahụ, ọ chọrọ ntakịrị ihe onwunwe.
Ma ọ dịkarịa ala, afọ ojuju m na LXDE ma ọ bụ ọbụna OpenBox, enwere m mmasị ọsọ ọsọ ọ bụghị ịmebe.
Iwu KDE !!
Ebe ọ bụ na Gnome 2 apụla, ana m eso Ubuntu 11.04 na-aga ... Na-achọ "ihe" nke dabara m na ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ ... Ma echere m na m ga-arapara na Xfce. Thunar? Ọfọn, m na-eji Midnight Commander ma ọ bụ TotalCommander n'okpuru mmanya (gbaghara, Ọ BONEGH of onye njikwa faịlụ m gbalịrị na Linux bịa nso, obere obere ịkụ ya). Vidio? VLC, n'ezie. Audio? Taa achoputara m Qmmp, nke abughi ihe ozo kariri Linux winAMP, o nwediri ike iji skins 2.x. Xfce na Linux Mint dị ezigbo mma, ebe ọ na-agbanwe menu ngwa "nkịtị" maka mintMenu zuru oke.
Na nke ahụ, enwere m sistemụ nke pere mpe (PC nwere afọ ole na ole, enweela 120Gb nke HD), na-erepịa obere, ma na-adọpụ uche. Nsogbu m nwere na KDE 4 ma ọ bụ Gnome3 bụ n'ụzọ bụ isi na enwekwaghị m oge "ịmụ" ebe ihe dị: ma gburugburu ebe obibi dị nkọ, ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ maka m. Ọ dị mma, enwere ihe a ga-eme site na njedebe (anaghị m eme mkpesa, abụ m nkịta ochie ma amalitere m kọmputa tupu IBM rere PC mbụ ...), mana ọ bụrụ na m ga-ala n'iyi 4 nkeji cheta ebe m kwesiri igbanwe okirikiri desktọọpụ, anaghị m ahụ ebe nrụpụta ọrụ dị (ọ bụ ihe atụ….)
Ka o sina dị, mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, agbalịrị m (ma tụfuo) LXDE (ndị ọzọ nọ n'ezinụlọ agaghị achọ ya), Gnome3 / Unity / Shell (ọ bụrụ na isi ihe siri ike nke Linux bụ na ị nwere ike ịrụ ọrụ dịka ịchọrọ, gịnị kpatara ya Gnome I can't? Out?), KDe (ọ dị arọ, na-agbagwoju anya, ọ were m ihe karịrị ọkara elekere iji mebie ihe ahụ gbasara Plasma ma ọ bụ ihe ọ bụla akpọrọ, yana na netBook m ga-aga ịntanetị iji mara otú o si gbanwee dị ka «nkịtị na nke ngwa ahụ ... nke ọma, pụta)
Na nkenke: Enwere m Xfce na mint na cinnamon (linuxMint + Cinnamon). Anọ m na ya. N'ezie, m nọnyeere liveUSB delinuxMint Xfce. 🙂
Achịkọta n'okpuru mmanya? Hahaha, kedu egwu. Ọ bụ na ị nụbeghị Dolphin, ka ị nụ? na Krusader?
lxde abụghị desktọọpụ adịghị mma, ọ bụ kachasị m maara na obere oge ị nwere ike ịme ya mara mma ... votu na-akwado naanị gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ nke ọma na m ochie pc !!! haha
Nwara AwesomeWM ma ọ bụ dwm?
Daalụ maka ide edemede a na ndị niile nwere echiche. Mụtara ihe.
Anọ m na Linux afọ 2 ma ejirila m ọtụtụ nkesa nwere nsụgharị na gburugburu dị iche iche.
Enwetara m ubuntu Jaunty Jackalope gnome, enwere m mmasị n'ebe ọ nọ ma lụọ ubuntu. ma mgbe ọ pụtara na gburugburu ịdị n'otu ka m gbapụrụ dị ka a ga-asị na ha ji mgbọ na-achụ m. Agagharịwo m n'ọtụtụ ọgba aghara na-enweghị ike ịchọta ezigbo mmekọrịta, mana ịhụnanya laghachiri n'akwụkwọ ndetu m.
Ndị ọzọ dị mma mana m na-ahọrọ nke a n'ihi na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ masịrị m.
Zaghachi na afix
Daalụ maka ozi ebe ọ bụ na mgbe ọ bụla m chọrọ ibudata a n'aka-nri xfse.gnome oche b ..blablabla, na m na-aghọtaghị a isi, eziokwu bụ nnọọ izi ihe. ụwa nke software dị ịtụnanya
M na-ahọrọ LXDE, ọ bụ ìhè, dị oke ọsọ ọsọ, na-egosi ihe niile achọrọ ma nwee ike ịhazi ya nke ọma site na igwu egwu n'akụkụ oghere, magburu onwe ya n'enweghị obi abụọ.
Zaghachi gustavo martínez
Ọfọn, dịka m nwere nchegbu, arụ ọrụ m kemgbe 2000 na Linux, abụrụ m naanị onye ọrụ njedebe ma anaghị m enweta nke ukwuu na nke ịmegharị, isiokwu a na-ekwu maka mkpa na uto m na-anọnyere KDE, Enwere m netbook na kde na ijiji, agbalịrị m gnome kpochapụwo, 3, ịdị n'otu, xfce na ọfụma mana ọ naghị atọ ụtọ nke ukwuu ịrụ ọrụ na netbook na gburugburu ndị ahụ, ma eleghị anya gnome 2 dị ntakịrị ma na-atụle ihe ha kwuru n'elu ọ bụ ezigbo eziokwu mgbe ụfọdụ ọ na - ewe otu karịa na ntugharị karịa na arụ ọrụ ya mere m nọrọ na kde, na desktọọpụ m enwere m lint mint 14 na cinnamon ọ na - aga 100 ọ masịrị m nke ukwuu, n'eziokwu mgbe ị na - eji otu gburugburu mara ya na-efu obere iji megharia na onye ọzọ, mgbe m jiri gnome2 KDE na-efu m ntakịrị, echere m na mmiri mmiri ahụ nwere ike ịbụ iwebata ịdị n'otu na Ubuntu n'ihi na ebe ahụ ndị ọrụ kwagara na gburugburu ebe ọzọ, echekwara m na ọtụtụ ndị na-atụ obere ụjọ KDE, ha na-ekwu na ọ dị mma mana ọ dị obere, mana mgbe ha batara, ha nwere ezi ihe na uto ... Nhọrọ m bụ KDE: D ...
M na-eji LXDE, agbalịrị m ha niile ma ebe m na-achọ ọsọ, m doro anya na m ga-ahọrọ nke ahụ, ọ bụrụ na m ga-amalite site n'ile anya na desktọọpụ mara mma ma na-eri nri anya m na-ahọrọ KDE, mana enweghị ọsọ na ha abụọ.
KDE na-enweghị mmetụta ọ bụla etinyere n'ọrụ na ezigbo HW bụ _practically_ dị ka ngwa ngwa dị ka LXDE - a na-enye milliseconds nke ọdịiche nwere ike ịdị n'etiti otu desktọọpụ na nke ọzọ karịa ngwa niile dị na desktọọpụ ọ bụla ebe o doro anya na ị nweghị ike ịtụle arụmọrụ nke ngwa Ezubere maka KDE na ndị ahaziri maka LXDE.
Agara m na KDE n'ihi na gnome3 enweghị ahụ iru ala, m na-emeghekarị faịlụ ederede dị iche iche (doc, txt) na mpempe akwụkwọ. Ma gburugburu ebe ahụ gwakọtara ha ma etinye m ebe m chọrọ. Na Dolphin m na-enweta folda FTP, anaghịzi m achọ filezilla yana Kate m na-emeghe ma chekwaa mgbanwe na weebụsaịtị na-ejighị ndị ahịa FTP (ma e wezụga Dolphin)
Maka m kacha mma MATE, na Linux Mint, otu ngafe.
Ndewo, anọ m na Linux ọnwa 3 wee na-agagharị na nsụgharị na nkesa dị iche iche site na Ubuntu 13.04, 13.10, xubuntu, Linux mint cinnamon na xfce, crunshbag, fedora gnome na xfce, bodhi Linux, manjaro xfce, cinnamon na oghere, elementrị OS mara mma
na enwere m ike ikwu gbasara xfce na ihe kachasị mma bụ nke sitere na Manjaro na esoghị m ya, n'ihi na alụrụla m nwanyị kpamkpam na sudo apt-get install, hahaha
Mint xfce adịghịkwa njọ, esighi ike na-akụ
Zaghachi Leonardo Daniel Velazquez Fuentes
Enwere m mmasị na LXDE, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịme ihe ị ga - eme nke ọ bụla na desktọọpụ ndị ọzọ mana na - enweghị atụ ọsọ! Ọ dị oke, ngwa ngwa ọbụlagodi na-agba ọsọ dị egwu dị ka eclipse, gimp ma ọ bụ ihe nchọgharị ndị dị ugbu a na ọtụtụ taabụ mepere emepe.
Ọ bụ ezie na KDE nwere ihe niile dị na ya ma na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe, nnukwu oriri nke ihe onwunwe na-eme ka ọ dị arọ ma nwayọ nwayọ maka ọtụtụ arụmọrụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na diski diski nwere afọ ya ma tụfuo mgbanwe ya. Agbanyeghị na ọ bụ eziokwu na LXDE ka akwadoro maka ndị ọrụ nwere obere ahụmịhe n'ihi na oge ụfọdụ enwere arụmọrụ na-enweghị eserese eserese na ndabara ma ị ga-abanye na ọdụ ahụ na-atụ ụjọ, nke a bụ okwu mkpirisi keyboard (enwere Obkey mana adighi etinye ya na ndabara).
Echere m na nnukwu ọsọ nke LXDE (dị ngwa ngwa karịa Windows XP) na-akwụ ụgwọ maka adịghị ike ole na ole na arụmọrụ ọ nwere yana dị ka ebe siri ike, ọ na-amalite ọsọ ọsọ karịa desktọọpụ ọ bụla na ngwa gnome niile na-arụ ọrụ zuru oke. Bịanụ, ọ bụ naanị okwu maka imeghari ya na obere omume na iji ya kwa ụbọchị bụ mpempe achicha; ichefu banyere slowdowns mgbe emeghe windo, mkpọka n'ihi enweghị ebe nchekwa, oké indexing nhazi, ndị ọzọ. Ite ọ bụla zuru 🙂
kde nwere ike ahaziri ya ka o yie ndi ozo desktops
Gnome2 bụụrụ m ebe desktọọpụ kachasị mma m nwara. Ọtụtụ atụmatụ ndị dị mfe ma mara mma mere onye njikwa Mexico otu ihe ọzọ na ndepụta m Gburugburu Ebe Ndị M Ga-achọ. Ọ bụ ya mere m ji kwuo, ERA.
Mgbe Gnome3 pụtara, ọhụụ m juru m anya; Kedu otu ọ ga - esi kwe omume na ruo ọtụtụ afọ n'iji ogwe abụọ ahụ, otu maka ngwa na - arụ ọrụ ga - apụ n'anya na m ga - esi n'otu windo gaa na nke ọzọ n'ụzọ dị egwu, nke bụ ịpị igodo isi ma ọ bụ mepee ngwa ngwa a gọziri agọzi ? Na nke ndị mmegharị ahụ, na-akwụsị ọnọdụ ahụ.
Ka o sina dị, echere m na Gnome3 bụ fiasco zuru oke ma nwee ebumnuche doro anya iji kwado Unity. Echere m na onye nke ikpeazụ tiri ya ihe. Amaghị m.
A dọtara m na LXDE ogologo oge. KDE bụ maka ndị na-achọ ịhazi. Ọ bụghị m, n'agbanyeghị. Mmasị bụ ihe ụtọ.
N'ime Linux ọ bụla, ana m anọnyere Linuxmint KDE na ndị nke m jiri fedora, suse, ubuntu, mandriva cinemon wdg ma m ga-eji linuxmint17 dị mfe iji wụnye ngwa niile mmemme multimedia, ịntanetị, ọfịs ọfịs nyocha ihuenyo ahụ, akwụkwọ ahụaja wdg.
Zaghachi Carlos Bolaños
na-enwe olile anya na ị dị mma mgbe ị gụrụ nke a, a na m agwa gị, azụrụ m kọmpụta dị njikere nke ejiri windo 7 nye m, --- amd athlon IIx2250 (64 bit) processor na 3000 mhz, nne targ asrok n68-vs3, ddr3- a1 2048mb / 400mhz, - nke bu onye pirate, n’ihi nsogbu nke onodu aku na uba ma choo uzo ozo n’abia ubuntu, linuxmint, ma n’oge a fedora -olite, desktọọpụ-86-64-20-1. iso– nke nyekwara m nsogbu dịka ịwụ ịtụnanya. Na Ubuntu enweghị m ike ịme ụda, ebudatara mmelite fedora abụọ mana ha arụghị ọrụ, n'ihi na ọ naghị ekwe ka m mee ihe ọ bụla mgbe m banyere desktọọpụ ebe ọ bụ na cursor anaghị agagharị ma ọlị, na-emecha ịme ihuenyo ma ọ bụ ihe oyiyi nkwarụ na anya. Taa achọrọ m ịwụnye windo ọzọ ma ọ nweghị ike, agbalịrị m ịwụnye ubuntu mana ọ bụghị, ọ naghị agụ diski nwụnye, na post m gụrụ ya na-ekwu na ụdị fedora a na-eme ihe Windows 8 mere, nke bụ imechi ụzọ ka m ghara inwe ike ịwụnye sistemụ arụmọrụ ọ bụla ọzọ. ———– kedu ka m ga - esi meziwanye nka ma ọ bụ wụnye distro ọzọ. biko nyere aka.
Zaghachi Román Alejandro Lazcano Hdez.
Okechukwu Iwundu dijo
Nke a blog nyere m aka nke ukwuu ịhọrọ interface ... ọ na-egosi na onye ọ bụla dere ya nwere echiche zuru ezu banyere ihe ọ na-ekwu na ihe ọ na-ekwesịghị ikwu banyere nkwanye ùgwù m--_- /
Prọfesọ Yeow dijo
Obi abụọ adịghị ya na XFCE 4 na-efe efe n'ebe niile, na ike ọdịdị nke ọ nwere dị oke mma karịa Gnome. Mana KDE4 bụ ihe mara mma, nke mere na ọ dị afọ ole na ole nwere akụrụngwa ochie mana ọ bụrụ na enwere igwe akụrụngwa, KDE5 (nke na-agbanye nsụgharị mbụ) dị egwu. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụrụ na ị nwere karịa 2Gb nke KDE4 ebule (na mgbe ahụ mgbe 5th rutere) ọ ga-abụ ihe kachasị mma ị nwere ike ịhọrọ. Ka ọ dị ugbu a, XFCE ka bụ oke nhọrọ.
Zaghachi Prọfesọ Yeow
Onyinye Onyekwere dijo
Ruo mgbe MATE malitere ịkwatu ha: XFCE LXDE
Zaghachi na Demian Kaos
Abụ m onye ofufe KDE, ejirila m gnome ugboro ole na ole - ọ masịghị m ya - ọ na-ewute m, etinyela m LXDE na igwe adịghị mma, ana m anwale XFCE ma masịrị m karịa LXDE ...
Antonio Gonzalez onye nhazi ihe oyiyi dijo
Abụ m onye ọkà mmụta sayensị kọmputa, ọkachamara na onye mmemme, ana m eji windo n'ọfịs maka mmemme mmemme na n'ụlọ m nwere laptọọpụ Windows na Linux, mbadamba na ekwentị na gam akporo.
Enwere m ọtụtụ distros ma nọrọ na Debian, maka ike ya, ọtụtụ faịlụ na nkà ihe ọmụma.
Ejiri m gnome 2 mee ka ọ dị mfe ma dịkwa mfe, mana ebe ọ bụ na m na-arụ ọrụ na faịlụ ọtụtụ, enwere m iwe na eziokwu ahụ bụ nautilus (dị ka ọnwa) na-ehichapụ faịlụ (folda) faịlụ / folda na-enweghị ịrịọ nkwenye, nke nwere ike inwe nkwarụ / gbanye na Windows Explorer, Dolphin na PCManFM
Ajụrụ m ìgwè gnome ahụ maka atụmatụ ahụ ma ha kwuru na nke ahụ bụ imewe ahụ ma ha echeghị ịgbanwe ya.
Na gnome enwere m ike imeghe faịlụ site na PC ndị ọzọ na netwọkụ mpaghara, nke anaghị arụ ọrụ na KDE / LXDE na Dolphin / PCManFM n'otu n'otu, ekwesịrị m idetuo faịlụ ahụ na diski mpaghara ka m nwee ike iji ya.
Otú ọ dị, na distros dị ka knoppix, PCLinuxOS (PCLOS) na ọbụna na debian live-cd ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, mana mgbe ị na-etinye ha na pc m, ma zuru ezu (ngwugwu meta) na otu otu (site na nghọta ma ọ bụ synaptic) enweghị ihe ịga nke ọma. Enweela m ma hazie ọtụtụ ọrụ ntanetị (KIO, SMB, wdg).
Agbalịrị m iji Dolphin na PCManFam na gnome ma enwere ọtụtụ ihe fọdụrụ na enweghị ike iwekota.
Site na gnome3 anaghị agba m ume na interface ma ọ bụ ọchịchọ maka osooso vidiyo, mana enwere ike iji ya, ọ nwere ike mepee faịlụ na netwọkụ dị na mpaghara mana ọ naghị ajụ nkwenye mgbe ị na-ehichapụ / izipu ihe mkpofu.
Na KDE ọ bụrụ na ọ rịọ maka nkwenye mana enweghị m ike imeghe faịlụ na netwọkụ mpaghara
xFce bụ gnome dị mfe, amụrụ m ya nke ọma ma ọ masịghị m, ọ na-ahapụ m mkpa abụọ ahụ
Ahụrụ m LXDE n'anya, mana enweghị m ike imeghe faịlụ na netwọkụ mpaghara.
Etu esi hazi PCManFM ma ọ bụ dolphin iji nwee ike imeghe / jiri site na faịlụ sitere na nchekwa nchekwa na netwọkụ mpaghara?
Otu esi eme ka Nautilus rịọ maka nkwenye mgbe ị na-ehichapụ faịlụ ma ọ bụ folda?
M na-ahọrọ gburugburu nke na-egbo mkpa abụọ ahụ
Ọbụna m na-akwụ ụgwọ maka ngwọta nke ọbụlagodi m mkpa
Zaghachi Antonio Gonzalez
Mgbe m rụsịrị ọrụ na gnome 2 gafere kde 4, nhọrọ 3 nke gnome ahụ emeghị ka obi dị m ụtọ ma ọlị, na nke ọzọ, ọ tụrụ m ụjọ nke mere m jiri mwupụ elu si kde ruo 5 ma site n'oge ahụ ọ jidere m, echere m na ọ bụ desktọọpụ zuru oke Banyere Deepin enwebeghị ike ịgbari ya, ọ mara mma ma nwee ike ịhazi ya mana ọ nweghị ihe m na-amaghị na ya na Lxde na Xfce ha ka dị ka isi ma dịkwa njọ.
KDE 5 bụ n'ezie onye mmeri.
Zaghachi Roberto Pérez
NA OKWU !!
Linaro meziwanye arụmọrụ nke gam akporo 4.0.4 ruo 100%
Akwụkwọ edemede mepere site na Digia na Obodo KDE